Waraysi waalidiinta wiilal ku xiran Maraykanka - BBC News Somali
Waraysi waalidiinta wiilal ku xiran Maraykanka
25 Oktoobar 2015
Qaar kamid ah waaldiinta dhalay 7 wiill oo loogu xiray waddanka Maraykanka, danbi ah in ay ku biirayeen kooxda Dawladda Islaamiga ee ka dagaallanta Suuriya iyo Ciraaq ayaa ka cabanaya xaalada ay ku sugan yihiin caruurtoodu.
Hooyada dhashay mid kamid ah wiilashaas, ayaa sheegtay in wiilkeeda gooni looga saaray wiilasha kale loona diiday in ay booqato. laakiin dawlada ayaa sheegaysa in sidaasi loo yeelay amaankiisa awgiis.
Wiilashaas, ayaa laba kamid ahi ay qirteen dabiga loo haystay shantakana, waxaa la sheegayaa in dacawadoodu ay bilaabmayso bisha February 16 keeda ee sanadka 2016.
Hadaba, wariyaha BBC-da Maxamed Xaaji Xussen, ayaa waraystay laba ka mida waalidiintaas wiilashaas dhalay oo kala ah, Ayaan Mohamed Faarah oo dhashay Mohamed Abidixamid Faarah iyo Cadnaan Abdixamiid Farah iyo Faadumo Abdullaahi Xuseen oo dhashay wiilka layiraahdo Guleed Cali Cumar. Waxanu ku hormaray Ayaan oo uu waydiiyay bal wararkii ugu danbeeyay ee ay wiilasheeda ka hayso.